कांग्रेसको आक्रोश : सरकार एनजिओको मतियार बन्न मिल्छ ?
८ मंसिर २०७५, शनिबार १६:२३
काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजना हुने एक एनजिओको कार्यक्रममा नेपाल सरकार र संघीय संसद सहआयोजक भएको भन्दै प्रमूख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
शनिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले भने, ‘मङ्सिर १५ मा काठमाडौंमा एउटा एनजिओको कार्यक्रम रहेछ । त्यसमा एनजिओ आयोजक छ, सरकार र संसद सहआयोजक छ । यस्तो गर्न मिल्छ ? यो देशको अपमान होइन ?’
‘सरकार सहआयोजक र एनजिओ आयोजक हुन मिल्छ ? कुनै धर्मको प्रचारका लागि सरकारले यस्तो कार्यक्रम गर्न मिल्छ ?’ शर्माले भने, ‘नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश हो । हाम्रो संविधान धर्मनिरपेक्ष छ । तर, सरकार आफै धर्मको प्रचार गर्दै सहआयोजक बस्न मिल्छ ?’
शर्माले जनताका समस्यामा सरकार नभेटिएको आरोप पनि लगाए । उनले भने, ‘ओली सरकार हाम्रो पनि सरकार हो । यो नेपालीको सरकार हो । राष्ट्रको मर्यादामा पनि सरकार चुक्यो । निर्मलाका बाबुको मानसिक सन्तुलन बिग्रिएको छ । बलात्कारीको खोजीमा धर्नामा बसेका पिताजीको सन्तुलन बिग्रिदा सरकार कहाँ छ ? सरकार निर्मलाको न्यायमा छैन । सरकार एनजिओमा छ ।’
Tagsनेपाली काँग्रेस विश्वप्रकाश शर्मा